Warbixin:Ujeedada Ka Dambaya Bixinta Magaca UGUS iyo Saameynta Uu Ku yeelan Karo Saxafiyiinta Soomaaliya Ka Howlgala.
Wednesday May 06, 2015 - 14:57:42 in Wararka by Super Admin
(Rating 3.0/5 Stars) Total Votes: 41
03 May,2015 oo Sedax maalmood laga joogo waxaan war baahinta ka dhageystay sarkaalka madaxda u ah Sirdoonka maamulka Muqdisho oo saxaafadda ugu goodinaya in ay iska dhaafaan isticmaalka magaca Al-Shabaab kuna badalaan magaca (UGUS) oo uu ku fasiray u
03 May,2015 oo Sedax maalmood laga joogo waxaan war baahinta ka dhageystay sarkaalka madaxda u ah Sirdoonka maamulka Muqdisho oo saxaafadda ugu goodinaya in ay iska dhaafaan isticmaalka magaca Al-Shabaab kuna badalaan magaca (UGUS) oo uu ku fasiray ururka gumaadka ummada Soomaaliyeed.
Taariikhdu markii ay ahayd 04 May,2015wuxuu magacan isku badalay mid loogu yeero dowladda qudheeda loona fasiray hab si dhab ah u waafaqsan dowladda iyo waxa ay tahay "Ururka Gumeynta Ummada Soomaaliyeed).
Si kastaba ha ahaatee waxaan qormadan ku eegi doonaa hadduu Rabbi ka raali noqdo, halka asal ahaan uu ka yimid magacan, ujeedada laga leeyahay iyo saameynta uu saxaafadda ku keeni karo.
Ujeedada Magaca Iyo Cidda DF-ka ah U Keentay.
Dhowr waji ayaan jeclahay inaan uga jawaabo su’aalaha sare ku xusan, anigoo isticmaalaya hadal heynta bulshada iyo caddeymo dhab ah oo aan shaqsi ahaan helay.
Waa midda kowaade waxay dad badan marki aan la sheekeystay ay ii sheegeen in habka ay dowladdu u hindistay magaca UGUS uu lamid yahay qaabkii horay loogu yaqiinay DF-ka oo ka fiirsasho iyo caqabadaha uga imaan kara aan loo eegayn.
Sarkaal ayaa habeenkii ka dhargaya muqaadaraad wuxuuna subixi war baahinta lasoo istaagaya wixii uu ku marqaamo isagoo aanan ka fiirsan faa’iido iyo khasaaro wixii uu u keeni karo.
Markii Tuur yare uu isticmaalka magaca ku handadayay saxaafadda wuxuu u sheegay iney dad soo alifeen islamarkaana uusan soo marin wada tashi, taasoo muujineysa in markii uu socon waayo ama lagu fashilmo kadib ay madaxda dowladdu cudur daar ka dhigato inaanan laga wada tashan iyaguna aysan raalli ka ahayn.
In shaqo maalmeedka dowladdu uu yahay wax habeenki lagu marqaamo maalintina lagu dhawaaqo ayaa waxaa tusaalooyinka loo soo qaato kamid ah magacii ay u bixisay xukuumaddii Farmaajo oo ahaa (Tayo).
Magacan ayaa wuxuu cagsi u noqday sida kan UGUS kadib markii xukuumaddaasi noqotay tii ugu tayada xumeyd, waana tan la wada ogyahay in madaxweynaha Uganda oo isagoo jooga Kampala u yeeray Farmaajo kadibna ku khasbay inuu is casilo.
Sarkaal dowladda ka tirsan ayaa ku marqaamay inuu magac qurxoon u sameeyo ciidanka dadka ka raafa maalin walba isagoo ugu yeeray Nabad sugid iyo Gaashaan, laakin waxay natiijadu noqotay in shacabku qaataan magaca ah (Ashahaado la dirir) maadaama ciidamadan ugaarsadaan dadka sunnada ka muuqato iyo kuwa maal qabeenada ah.
Magaca ay dowladdu ku dhawaaqday ayaa lamid ah erayga Khawaarij oo ay hadda ka hor ku dhawaaqi jirtay kadib markii wadaad xumayaasha u laqineen ugu dambentiina ay ogaatay ineysan mujaahidiintu lahayn sifooyinka magacaas.
Intaas waa aragtiyada aan kasoo uruuriyay dadka indheer garadka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa dowladda iyo siyaasadeeda, balse waxaa jira caddeymo rasmi ah oo muujinaya cidda rasmiga ah ee magacan u keentay DF-ka.
Itoobiya ayaa magaca UGUS usoo gudbisay sarkaal ka tirsan dowladda isaguna waxa uu kaga dhawaaqay war baahinta sida ay ii xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay oo Baarlamaanka ka tirsan.
Mid kamid ah ilahan ayaa si rasmi ah iigu sheegay in ninka magacab keenay uu yahay Axmad Cali Daahir Xeer ilaaliyaha dowladda oo wakiil ka ah xabashida xilal bandanna kasoo qabtay dowladooda.
Axmad ayaa waxaa magacan usoo dhiibay saraakiil ka tirsan kuwa Itoobiya ugu magacaaban gumeysiga Soomaaligalbeed, waxaana la og yahay in magacyadan noocan ah ay Xabashida u isticmaasho ururka ONLF oo ay u bixisay UBO waxaana lagasoo gaabiyay (Ururka Baabi’inta Ogaadeen).
Hadafka Itoobiya Iyo DF Ka Leeyihiin Magacan.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waa cidda kaliya ee maanta wadanka ka yureeneysa Itoobiya oo dooneysa iney gumeysato ummada Soomaaliyeed, waana midda keeneysa in saraakiisheeda ay soo waaridaan magac ay is leeyihiin waad ku suurad xumeyn kartaan mujaahidiinta.
Dowladda oo markii horaba caan ku ahayd iney si dhameystiran u aqbasho awaamiirta shisheeyaha ayaa dhankeeda jecleysaneysa in arrimo badan oo ay faa’iido u aragto.
Marka kowaad waxaan og nahay in hey’adaha dowladdu yihiin kuwa go’doon ah oo bulshada ka takooran sababo amni darteed, sidaa darteed ayaa waxay qeybahooda ammaanka iyo warbaahintu ku dadaalayaan in wariyaasha Muqdisho oo dhan lamid noqdaan.
Waxay og yihiin in wariyihii lagu khasbo arrinan uu masiirkiisa noqonayo labo arrimood oo ay mar walba muhim u arkaan kuwaasoo kala ah in la dilo ama uu dhankooda u xaroodo.
Haddii la dilo waxay aaminsan yihiin inuu tagay suxufi dhax-dhaxaad ahaa oo caqabad ku ahaa, haddii uu u xaroodana waa sidii ay rabeen oo waxay heleen ciidan ama askari cusub oo ku caqiido iyo mab da’ ah, waxaana arimahan kaaga marqaati kacaya inta jeer oo ay sannadkan kaliya xireen wariyaal iyo Idaacado.
Intaa waxaa dheer oo ay xoogga saarayaan iney baaba’do sumcadda saxaafadda dhex-dhexaadka sheegata ee Muqdisho si war baahintooda dhageystayaal u hesho dhanka kalana bulshada u waayaan akhbaaraadka la xiriira dhacdooyinka.
Sababtoo ah markaan eegno aqoonta xagga saxaafadda lagana hadlayo wararka iyo sidey u kala muhiimsan yihiin ayaa waxaa la tilmaamaa in bulshadu xiisayneyso warka xiriirka la leh ama saameynta ku leh, taas ayaa keentay in warbaahinta dowladda weyso dhageystayaal maadaama ay saacad walbaahi tabiyaan warar aan faa’iido u lahayn bulshada sida:- gaal hebal ayaa maanta kasoo dagay garoonka, madaxweynaha ayaa gaal hebal la qadeeyay, siminaar ayaa xildhibaanada loogu qabtay Kambpala iyo wax lamid ah.
Saxaafadda ayaa waxaa la gudboon iney qiimeyn ku sameeyaan magaca UGUS iyo fasiraada ay siisay dowladda oo ah iney mujaahidiintu iska laayaan dadka Soomaaliyeed.
Ma jirto cid shaki ka qabta in dhulka ugu amniga badan Soomaaliya uu yahay kan wulaayaadka islaamiga ah ee ay mujaahidiintu maamulaan kaasoo ay ku badbaaday diinta, nafta iyo dhammaan wax yaabaha kale ee maqaasidda shareecada islaamka.
Markaad eegto habka ay magaca ugu dhawaaqday dowladda waxaa kusoo baxaya ineysanba garan micnaha gummaad.
Gumaad waxaa la yiraahdaa dad badan oo meel la isugu keeno kadibna la ibaadeeyo sida:- xasuuqii Wagala iyo kii Gaarisa gubaay oo ay dowladda Kenya ku gummaaday 8000 oo Soomaali ah.
Mujaahidiintu waxay sameeyaan taa bilcagsigeeda waxaana tusaale kuugu filan weerarkii dhawaan ka dhacay Gaarisa oo lagu dilay in ka badan 200 oo Kiristan Kenyaan ah inkastoo ay iyagu sheegeen in 147 laga dilay.
Mujaahidiintu waxay gumaadaan shisheeyaha kusoo duulay wadanka iyadoo la og yahay in hal maalin ay fagaaraha deegaanka Calamada kusoo bandhigeen 200 oo shisheeye Burundi ah.
Waxaan aragnay madaxtooyada, Xalane, UNDP wasaarado hoteello iyo maxkamado lagu gummaaday shisheeyaha iyo dowladda intaba. Haddaba kuwaasi ma shacab Soomaaliyeed bey ahaayeen?.
Ujeedada kale ee ay dowladdu ula soo hadaaqday magacan waxaa la dhihi karaa, waxaa aad u dhibay erayga Al-Shabaab oo ay aad uga baqaan, waana tii uu ninka BS-ta hogaamiya uu afkiisa ka sheegayay in magaca Al-Shabaab uu dhibay.
Taariikh Ma Leeyahay Dagaalka Noocaan Ah.
Nooc walba oo kamid ah dagaalka maanta adduunka ka socda waxa uu leeyahay taariikh ku xusan kitaabka iyo sunnada.
Haddii maanta ay gaalo muslimiinta u bixisay argagixiso iyo kuwa lamid ah waa arrin dib noo xusuusineysa sidii ay gaaladu magacyo xun xun ugu bixin jireen Nabigeena Muxamad scw iyo dadkii raacay.
Qur’aanka waxaan ku aragnay iney Nabiga scw ku tilmaameen saaxir, waalan iyo wax yaabo lamid ah sidoo kale waxay gaalo sidaas oo kale magacyo xun xun ugu bixin jireen dhammaan rusushii uu Allaah koomka usoo diray oo ay illaa iyo maanta caaynayaan.
Soomaaliya markaan eegno, waxaa jirtay in gaalada iyo dadkii sida DF ula shaqeynayay ay magacyo xun u bixiyeen dadkii diinta iyo dalka usoo halgamay ee uu Sayid Maxamad Cabdulle Xassan kamid ah, waxay ku tilmaami jireenWadaadka waalan iyo wax lamid ah haddana uma hirgalin illaa maantana waa loo duceeyaa, taariikhdiisa ayaa la aqriyaa, gabayadiisana waa la xifdiyaa, halka kuwii gaalada raacayna taariikhdoodu mugdi gashay.
Shisheeyaha iyo dadka raacsan waxay ku dadaalayaan in nuurka Allaah, jihaadka oo Baarka islaamka ah iney afkooda wasaqda ah ku damiyaan laakin Allaah ayaa diiday wuxuuna dhameystirayaa Nuurkiisa, haba karaahsadeen UGUS iyo Amisom e’
Dhibaatada Ay Saxaafadda Kala Kulmi Karto Amarka DF.
Markaad eegto saameynta ay keeneen wax yaabaha arrintan oo kale ah ee dunida ka dhacay, waxaad ogaaneysaa in dad badan ay u dhinteen ama u dhaawacmeen xarfo ay afkooda ka sheegeen, waxaana u dambeeyay kuwii Nabiga scw caayayay ee lagu weeraray gobolka Teaxas ee dalka Mareykanka.
Dadka intooda badan marka ay ka hadlayaan hadalada xad gudubka ah ee loo geysto dadka mujaahidiinta ah, waxay ka eegaan oo kaliya dhanka adduunyada iyo nolosha qofka gefka sameeyay, laakin waxaa taa ka muhiimsan oo aan baraarujinayaa in ay gaalnimo noqoneyso in la aflagaadeeyo qofka muslimka ah ee la jihaadaya gaalada waa haddii aad ucolaadiso jihaad naceyb iyo jaceylka shisheeyaha.
Qofka diinta u dagaalamaya oo la caayo waxay lamid tahay diinta oo la caayay.
(ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون)
(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)
Baaq Ku Socda Ummada Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii waxaan ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed ugu baaqayaa iney ku daysadaan dadka ay ku abtirsanayaan oo ah nabiga scw iyo saxaabada oo ahaa kuwa la dagaalama gaalada iyo munaafiqiinta.
Wadankeena wuxuu ku jiraa gumeysi, waad aragtaan in hal Nin reer galbeed ah oo kasoo dagaya garoonka diyaaradaha Muqdisho awgii loo xir xirayo kumannaan muslimiin ah, Nasiib darro ayeyna inagu tahay in ninkii madaxda u ahaa kuwii Nabigeena caayay dartii dadka loo xirxiro.
Walaalayaal goorma ayey muslimiintu sidaa u dulloobeen gaaladuna sharaftaas u yeesheen. Xaqiiqadi waa marki aanu jihaadka ka tagnay sida uu inoo sheegay nabigeena SCW.
"اذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم"
Ummada Soomaaliyeed haddaanu nahay waxaa nala gudboon inaan qaadano hadalka Allaah iyo kan rasuulka, kaasoo aan adduuna ku cizoobeyno aakhirana aan janno ku heleyno.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ "
W/D Wariye Warfaa Kheyrdoon
Duulimaadyada caalamiga ah ee Soomaaliya oo berri dib ubilaabanaya.
Sababta uu adeegga Internetka uga go'ay inta badan gobollada dalka Soomaaliya oo la ogaaday.
Dowladda Uganda oo sheegtay in ay diyaarado dagaal ku biirinayso duullaanka Soomaaliya.